Lahatsary: ​​Ity no loko iPhone 5s vaovao amin'ny Space Gray | Vaovao IPhone
Lahatsary: ​​Ity no loko iPhone 5s vaovao amin'ny Space Gray
Ny iPhone mainty 5 dia toa tsara, fa ny loko tsy mahazaka mihitsy ary avy any Apple dia noterena hanova ny paikadin'izy ireo amin'ny iPhone manaraka, amin'ny iPhone 5s. Izany no antony ahitantsika amin'ilay iPhone vaovao, sambany, ny tonony vita batemy ho «Space Grey«, Izay azo alaina amin'ny iPods koa ankehitriny ary azo antoka fa hita taratra amin'ity volana ity amin'ny iPads sy iPad mini.
En Vaovao IPhone dia efa nasehonay anao ny endrik'ilay iPhone 5s loko volamena, iray amin'ireo tena irina indrindra any Etazonia, ary ankehitriny izahay dia mitondra horonantsary atolotray anao, amin'ny an-tsipiriany, ny Ny fisehoan'ny iPhone 5s ao amin'ny Space Gray. Rehefa afaka roa herinandro mahery ny fampiasana tsy misy fonony dia afaka milaza isika fa ny loko amin'ny iPhone 5s vaovao dia mahatohitra kokoa noho ilay hitantsika tao amin'ny iPhone 5 mainty, izay niteraka resabe. Misongadina ny fifangaroan'ny loko eo anoloana sy eo amin'ny zana-by. Ny sisin'ny bokotra an-trano dia tsy dia misongadina loatra (amin'ny iPhone 5s miloko volamena dia miavaka izy) ary ny ao aoriana dia afaka miovaova arakaraka ny hazavana omena amin'io fotoana io.
Ao amin'io horonan-tsary iPhone 5s volondavenona fotsy Atorinay anao ny faritra rehetra amin'ny telefaona: ny bokotra an-trano, izay nohavaozina mba hipetrahana ny sensor fanamarinana ny dian-tànan'ny Touch ID (raha ny marina, amin'ny ampahany amin'ny horonan-tsary dia azonao jerena ny fomba fanokafanay ny finday amin'ny dian-tananay) sy flash LED roa heny.
Farany, tokony hamafisintsika fa ny telefaona izay manaraka ny endrik'ilay teo alohany dia ny iPhone 5s fotsy sy volafotsy miloko.
Fanazavana fanampiny- iPhone 5s: Famerenana sy fanadihadiana momba ny horonan-tsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5s » Lahatsary: ​​Ity no loko iPhone 5s vaovao amin'ny Space Gray
Chuso dia hoy izy:
Pablo, inona no loko ijanonanao? Rahampitso dia mahazo ny volamena aho ary tsy haiko raha tsy manokatra azy ary maka ny volondavenona… misalasala aho.
Ny olona manana volamena dia nilaza tamiko fa tsara tarehy izy io ary mahasarika ny sain'ny olona. Azo antoka?
Mamaly an'i Chuso
tsy manana toetra manokana ianao sa ahoana?
Manana izany aho ary betsaka lavitra noho ianao azo antoka.
Nandany vola 1200 euro aho ary nividy vokatra izay mbola tsy hitako nampitahaina.
Farafaharatsiny mba hankasitrahana ny fahafantarana ny hevitry ny olona iray izay samy manana azy roa.
Ny mifanohitra amin'izay no lazain'ny fanehoan-kevitrao.
Rehefa fantatrao ny zavatra tadiavinao sy izay tianao, dia ao anatin'ny fotoana tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitra manjaka, ny toetra, fa tsy izay tian'ny hafa.
Manampy izy ireo dia hoy izy:
Inona no ifandraisan'ny maha-olona azy amin'ny fisafidianana loko iray amin'ny zavatra iray.
Ny omby tsy maintsy vakianao ...
Valiny ho an'i Agrecan
Misaotra betsaka noho ny fahazoana. Tonga hatrany amin'ny fahalalana ny hevitry ny olona iray manana ny vokatra ka afaka mividy azy. Nandany vola be tamim-paharisihana aho ary arakaraka ny ahalalanao ny tsara kokoa, sa tsy izany?
Tsy nisy nanery anao hamaky, sa tsy izany?
Raha nampiasa saina kely kokoa ianao dia mety ho azonao ny hevitro.
Pablo, inona no loko ijanonanao?
Izany dia mahatonga anao ho tara, tsy azo antoka ary tsy ampy toetra.
Joy Israel Encinas dia hoy izy:
Misy ny olona efa nafana na nahita ny loko hafa manokana dia tiako ny volamena fa rehefa hitako izy dia tsy tiako izany, tsara kokoa noho ireo sary ananan'i paoma ny pejy noho ny mahita azy ara-batana, ankoatr'izay miseho mitovy amin'ny vehivavy ary manome fahatsapana ho sandoka, nefa mbola amin'ny lamaody eto Etazonia ihany. Ny fanontaniako dia tsy tsy fahampian'ny toetra manokana, te hahafantatra izay loko tsara kokoa noho ilay hoe ilay mainty teo aloha dia voaporitra tamin'ny fahitana azy I PAGE 1026 DLLS ho ahy tiako ho fantatra raha voarangotra ity mainty ity na tsia toa ilay teo aloha.
Valiny amin'i Gozo Israel Encinas
Misaotra betsaka anao koa Gozo.
Raha ny marina, ny fahalalana ny hevitry ny olona afaka nahita na nanana, dia tena mahaliana ny mahafantatra ny hevitr'ireo izay efa nitantana.
Ny zavatra rehetra dia miova be manomboka amin'ny fahitana azy eny an-tananao ka hatramin'ny fahitana azy amin'ny sary. Rehefa nahita ny sarin'ny Volamena aho dia tsy nanana fisalasalana ary nitady izany aho ary hitako tamin'ny tolotra avo dia avo avy amin'ny olona iray avy any UK.
Tsy mieritreritra ny tenako ho tsy manana toetra manokana aho, mihevitra ny tenako ho irina mafy sy hikoropaka be. Ho tonga rahampitso na ny ampitso ary vohana indray mandeha, dia efa very lanja tsara.
Afaka nahita ny Iphone5 tao amin'ny magazay aho ary na dia tiako kokoa aza ny mainty dia nividy fotsy aho satria tsy tiako ny marika.
Tratrako ny Volamena, satria efa zatra ny fotsy aho ary mieritreritra aho fa mety ho tsara tarehy ny feo champagne.
Fa rehefa hitako tamin'ny horonantsary sy ny hafa fa volondavenona toy ny ipod izay ananako io dia nanana fisalasalana maro aho.
Amin'ny farany dia hiafara amin'ny fanokafako azy aho, tsy ho azoko nakatona ary mividy an-jambany ilay mainty ary hisambotra Eropa indray.
Misaotra indray amin'ny teninao.
manana twitter ve ianao?
Eny tokoa, ny volamena no tena jerena manokana mba hahafahany mankasitraka bebe kokoa ny farany. Raha tianao io tonony io ary mandeha amin'ny fombanao izy, dia atoroko azy izany.
tsy afa-po dia hoy izy:
Wow, nandany ny 3 minitra teo amin'ny fiainako fotsiny aho nijery zavatra efa hitako, tsy misy specs, tsy misy fampisehoana, tsy misy milaza raha voakorontana na zavatra mitovy amin'izany.
Miala tsiny raha milaza an'io, tena tiako ny iPhone News saingy efa mametraka mpameno madio isan'andro izy ireo ...
Pdta: Izaho dia iray amin'ireo (toa olona maro) mihevitra fa ny loko volamena dia ho an'ny vehivavy.
Valiny ho an'ny tsy afa-po
Mihevitra aho fa natao ho an'ny chonis / canis.
Mel dia hoy izy:
Tsy toy izany daholo ny rehetra, fa ny “tsikera” nataon'i Pablo dia tena mampiseho fa efa manana ny vaovao izy. Mangatsiaka noho ny valo ity zazalahy ity.
PS Vehivavy aho fa aleoko volondavenona, hatreto.
Valiny tamin'i Mel
Inona no volondavenona tianao? Volafotsy (volondavenona fotsy) na volondavenona misy mainty?
toerana volondavenona, ny iray hafa dia voatanisa ho fotsy.
Heverinao aza fa avy amin'ny xD izy ireo, andao hiara-hamory izy rehetra ary hanome azy ireo, enyiiiiiiiiiiiiii.
Tsy niraharaha ireo fanehoan-kevitra i Pablo. Ny horonan-tsary dia mampiseho ny zavatra tiako ho hita fotsiny, iPhone 5s mainty habaka amin'ny antsipiriany, voarakitra tsara sy voahitsy ihany koa. Io no nilaiko nanapa-kevitra momba io loko io. Etsy andanin'izany, manana dian-tsipika eo ankavanana havanana ve ianao? Malemy ve ity iPhone ity?. Misaotra tamin'ny horonantsary sy ny famerenana nataonao momba ny dorado, arahaba!
Misaotra tamin'ny hevitrao! Tsia, tsy voarangotra ilay hitanao. Ny finday dia nahatohitra ny rotsak'orana ary tsy nisy fonony ary tsy nisy simba tamin'ny loko.
Lahatsary tsara Pablo, isaky ny mahita aho dia mahatonga ahy haniry ny hisambotra azy sy hanavao ny iPhone 4. Na izany na tsy izany dia heveriko fa ny terminal izay hanome ilay baomba dia ny iPhone 6, izay hain'izy ireo havaozina ny endrika , manatsara ny fakantsary ary hampitombo ny haben'ny efijery.
Heveriko fa hanohy herintaona indray aho miaraka amin'ilay iray ananako ary hiandry ny manaraka, izay tonga lafatra ny Touch ID, ary ho be ny rindranasa izay manararaotra ireo 64 bit an'ny mpanera.
Amin'izao fotoana izao, na iza na iza manana iPhone manomboka amin'ny 4 mandroso, mividy iPhone 5s dia an-tsirambina kokoa noho ny tsy filàna, ary na iza na iza manana iPhone 5 dia tsy milaza aminao akory aho. Haingana kokoa ny iPhone 5s, eny, saingy ny fanatsarana ilaiko dia tsy tena entina ... efijery somary lehibe kokoa, fizakantena tsaratsara kokoa, fakan-tsary tsaratsara kokoa.
Tsy milaza aho hoe amin'ny farany dia tsy mitady izany aho ary tratra satria tena tiako, fa tsara kokoa ny manantona kely ary manambola izay € 700 amin'ny iPhone manaraka.
Misaotra betsaka, Odalie!
mahazatra ilay milaza fa samy miandry ny manaraka, tena manana ilay 4 ve ianao?
Eny manana ny 4 aho, raha nanana ny 5 aho dia tsy ho liana loatra amin'ny 5. Tsy mbola nanova ny findaiko aho satria ny ahy mbola miasa ary misy fotoana foana handaniana € 700 ...
iOS 7 dia matetika ao amin'ny iPhone 4, miadana kokoa, maka sary ratsy be izy, tsy manana siri, ary izany no antony handinihako ny mitsambikina mankany amin'ny 5s na ny manaraka. Raha mbola tsy nomeko dia satria tsy mora io ary mbola mitantana ny ahy aho.
Tsy nahita zava-baovao aho fa manana iPhone 5 mitovy loko volondavenona mitovy ...
Hahaha milamina fa lanin'ny fialonana ianao noho ny fanananao ny 5S! Ary manana BLACK iPhone 5 TSY miloko volondavenona ianao, eny ilay mainty izay maizina loatra ka tsy toa iPhone akory izy ary manjavona fotsiny amin'ny fijerena azy. Ity habakabaka volondavenona ity dia manana kilasy betsaka kokoa ary izy no tsara indrindra amin'ny vaovao loko.
aph340 dia hoy izy:
ny tsara indrindra amin'ny horonantsary, ny mozika hahahaha
Valiny amin'ny aph340
Fanavaozana ny Netflix amin'ny iOS 7, manampy ny streaming HD sy ny fanohanan'ny AirPlay